गर्भावस्था मा papaverine संग मोमबत्ती
गर्भावस्था - एक महिलाको जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अवधि, कुनै पनि बेवस्ताई भ्रूण गर्न जटिलताहरू र हानि परिणाम हुन सक्छ जब। बालक जन्ममा समयमा आफूलाई रोग, तनाव र आवश्यकता हो कि दबाइ प्रशासन अन्य अवस्था देखि रक्षा गर्न सम्भव हुनुपर्छ। सबै पछि, लगभग सबै औषधिहरू expectant आमा protovopokazany।
तर पटक तपाईं औषधी बिना गर्छन् जब छन्। र त्यसपछि आफूलाई प्रभावकारी औषधी रूपमा, तर पनि महिला को लागि एक अहानिकारक रूपमा र नजन्मेको बच्चा लागि मात्र होइन सिद्ध गरेको लागूऔषधको सहायता गर्न आउनुहोस्।
antispasmodic दबाइ खाएर - यी उपकरण चिकित्सकहरु papaverine समावेश गर्नुहोस्। इंजेक्शन, पाटी, papaverine र छोराछोरीको ट्याब्लेट संग मोमबत्ती: यो धेरै पक्षबाट उपलब्ध छ।
Papaverine अपवाद बिना, चिल्लो मांसपेशी को टोन कम गर्छ, र अङ्गहरू, बर्तन रगत spasms, ब्रोन्कियल, पेट relieves, दुखाइ समाप्त।
दबाइ ढिलो हृदय rhythms छ, मुटुको दर को शक्ति कम गर्छ, रक्तचाप lowers, रक्त बढ्छ, आफ्नो ठहराव मा bile को प्रवाह को बढावा।
Papaverine सबैभन्दा साधारणतया पेट गुहा मा आन्तरिक अङ्गहरूको, को रोगहरु मा चिल्लो मांसपेशी को spasms मा discharged। दबाइ javjaletsja गुर्दे, आंत्र र प्रयोगको लागि सङ्केत गर्छ hepatic colic, cholecystitis, स्पास्टिक संबंधी बृहदांत्रशोथ, pylorospasm।
एनजाइना pectoris, हृदय भास्कुलर कसना, मस्तिष्क, उच्च रक्तचाप, माइग्रेन मा भास्कुलर spasms: Papaverine भास्कुलर रोग लागि निर्धारित छ।
अन्य लागूपदार्थको संग संयोजन मा ब्रोंकाइटिस र श्वसन उपकरण अन्य रोगहरु उपचार गर्न प्रयोग papaverine।
यो लागूऔषधको मौखिक प्रशासन जो पाचन प्रणाली को रोगहरु सम्बन्धित हुन सक्छ, सम्भव छैन भन्ने हुन्छ। मा एक मजबूत antispasmodic प्रभाव छ जो papaverine संग rectal र योनी suppositories, - यस मामला मा, दबाइ को एक धेरै सुविधाजनक फारम नियुक्त गर्ने pelvic अंगहरु।
गर्भावस्था मा papaverine को प्रयोगको लागि सङ्केत गर्छ uterine hypertonus छ। Expectant आमा सामान्यतया प्रयोग गर्न धेरै सजिलो छ जो papaverine, संग rectal suppositories सल्लाह दिन्छन्।
को गर्भाशय को Hypertonicity कुनै पनि समय र कारण गर्भपात मा कम हुन सक्छ मांसपेशिहरु मा नै भोल्टेज मा रूपमा एक खतरनाक अवस्था हो। यो बच्नको लागि, तिनीहरूले papaverine प्रयोग गरेको छ, जो, आराम गर्न आवश्यक छ। papaverine संग मोमबत्ती, आन्तरिक अङ्गहरूको मांसपेशिहरु आराम रक्तचाप lowers, एक महिला थप तनावमुक्त, ढिलो हार्टबिट बनाउन।
गर्भावस्था को समयमा papaverine मोमबत्ती को आवेदन मा अनुभव को धेरै वर्ष दबाइ या त आमा वा भ्रूण हानि गर्दैन देखाउँछ। यस मामला मा, दबाइ पूर्ण छ रोक्छ धम्की गर्भपतन, तिनीहरूलाई वितरण मा लोड सामना गर्न मदत, रक्त नली बलियो बनाउँछ।
सबै औषधि जस्तै papaverine contraindications र साइड इफेक्ट को एक नम्बर छ। यो एलर्जी प्रतिक्रिया, निदाउरोपनको, कब्जियत, डराएको, रक्तचाप lowering हुन सक्छ। papaverine प्राप्त Contraindication एक गर्भवती अतिसंवेदनशीलता, tachycardia, उच्च intraocular davenie, कलेजो र थाइरोइड ग्रन्थि छ।
प्रायजसो, दबाइ राम्रो सहन थियो र एक लामो समय को लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
गर्भावस्था को समयमा Papaverine एक्लै प्रयोग गर्न सकिँदैन। दबाइ मानाङ्कन र औषधिको खुराक सक्छन् मात्र डाक्टर निर्धारण गर्न। दबाइ सबैभन्दा उपयुक्त फारम - मैनबत्ती। गर्भवती लागि Papaverine कहिलेकाहीं इंजेक्शन को रूप मा निर्धारित।
सामान्यतया नियमित अन्तरालहरुमा प्रति दिन 2-3 मोमबत्ती सुझाव दिन्छौं। तिनीहरूले सजिलै प्रशासित, र दबाइ प्रभाव लगभग तुरुन्त हुन्छ।
मा भने यो गर्भावस्था को शुरुवात को गर्भाशय को तनाव मांसपेशीमा राहत गर्न निर्धारित दबाइ, वितरण अघि papaverine संग मोमबत्ती cervix नरम र लाइटर disclosed छ गर्न आवश्यक छ।
'Sumamed' छोराछोरी, समीक्षा र सिफारिसहरू कसरी प्रयोग गर्ने
शरीर स्लिम कम्प्लेक्स: दुबला शरीर कसरी हासिल गर्न
महिला: प्रयोगको लागि निर्देशन
"Epigenes": समीक्षा, analogs, प्रयोग र मूल्य लागि निर्देशन
"Vibrocil": सस्तो अनुरूप तयारी, प्रयोगको लागि निर्देशन वास्तविक
एक ट्यांक माछा: विवरण
"Bifiform": एनालग वा मूल?
हाकिमहरूले मदत: को स्नातक - यो हुनुहुन्छ?
यो 12 हप्ता मा एक गर्भपतन गर्न सम्भव छ?
Canni (जेल पलिश): समीक्षा, वर्णन, लाभ
आँखाको थमनी रोग retinas। जोखिम समूह, प्रजाति, उपचार
बालिका मा synechia के हो?
मास्को मा TC "युरोपेली": एक सिंहावलोकन, यात्रा विकल्प र बेफाइदा
सर्वश्रेष्ठ स्पा सैलून बेलग्रेड: सिंहावलोकन, सेवा, प्रक्रिया र ग्राहक समीक्षा
Azov समुद्रको कहाँ छ? रूस को नक्सामा Azov को समुद्र। क्रिमीआ, Azov सागर